ट्रेन किन एउटा परिवहन भएको Safest मोडहरू छ | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 11/04/2022)
मा polemic युरोप मा बस बनाम तालिम एक कहिल्यै-अन्त्य विषय छ, सबैको आ-आफ्नो धारणा छ. तर, हामी पनि सुरक्षा बारे कुरा गर्दै छन्, र हामी भने - यो पर्याप्त छ? हामीले रोजेको यातायातको सुरक्षा सधैं पहिलो हुनुपर्छ, र हामी आज यसलाई सम्बोधन गर्दैछौं. सामान्यतया, मान्छे फरक यो विषय भेट्नुपर्छ गर्छन, आफ्नै परिभ्रमण प्राथमिकताहरू आधारमा. थप, नवीनतम समाचार हामी विश्वको कारक वरिपरि दुर्घटना बारेमा सुन्न, साथै. जबकि तपाईं शायद सुन्न छौँ त्यहाँ एक रेल दुर्घटना कहीं थियो, यस्तो हुन्छ. यो हावा संग गर्छ जसरी, कार, बस र अन्य यातायात साधन. तथापि, तथ्याङ्क स्पष्ट छन् - आधिकारिक, रेल यातायात को safest मोड यी दिन को छ! सुरक्षाको समान स्तर हवाई यातायातको लागि जान्छ जबकि यातायातका अन्य सबै माध्यमहरू पछि आउँछन्.
रेल सबै देशहरूमा यातायातको सबैभन्दा सुरक्षित मोडहरू मध्ये एक हो?
कुनै, यो होइन. सबै रेल र रेल नै गुणस्तर को हो छैन. जब हामी रेल यात्रा सुरक्षा कुरा, हामी सामान्यतया एक विशिष्ट देश को सन्दर्भ मा कुरा. साधारणतया, रेल यात्रा धेरै सुरक्षित छ, तर यो अझै पनि देशको रेल र जडानको स्थिति जाँच गर्न हानि गर्दैन यदि तपाईं रेलमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने।.
एक मोटरसाइकल हुनुपर्छ. मजाक (त्यहाँ केहि हास्यास्पद भन्ने छैन) डाक्टर habitually मोटरसाइकिल उल्लेख (अर्थात्, एक चढेर कारण पनि दुर्घटना) रूपमा “दाता चक्र।” जाहिर, यी दुर्घटना सामान्यतया तिनीहरूले अंग दाताहरुलाई प्रशस्त उत्पादन भनेर बारम्बार र घातक छन्. मा यात्रा गर्दै केही युरोप मा तेज रेल को धेरै दुर्घटना कारण छैन.
जब रेलरोडहरु र रेल दुवै पर्याप्त हेरविचार लिएको हो (अर्थात्, नियमित सेवा प्रदान, कायम, आवश्यक जब प्रतिस्थापित, आदि), तपाईं शायद कहिल्यै कुनै पनि दुर्घटना साक्षी छौँ यो यातायातका अर्थ. कारण एक छ, सडक यातायात विपरीत, त्यहाँ एक मात्र बाटो र एक यात्रा को अर्थ छ (अर्थात्, ट्रेन) यसको अन्तिम गन्तव्य एक मार्ग निम्न. कुनै अप्रत्याशित वाहन आफ्नो बाटो आउँदै छन्, तपाईं पाङ्ग्रा नियन्त्रण गुमाउन बनाउन. कुनै अचानक फेरबदल र पालैपालो छन्, वा अन्य तनावपूर्ण र सम्भावित खतरनाक अवस्थाहरू. यो किन रेल द्वारा यातायात यातायात को safest मोड को एक हालसम्म रहेका छ कारण मध्ये एक हुन सक्छ.
को abovementioned अलग्गै पर्यावरणीय लाभ त्यो हो, एउटै समयमा, हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्य लाभ, मात्र ट्रेन एउटा को परिवहन भएको Safest मोडहरू छ तर चढेर रेल हाम्रो समग्र स्वास्थ्य को लागि उत्कृष्ट छन्.
आजभोलि, सबैलाई overworked र काम र विपरित मा आफ्नो कुर्सी आफ्नो कार सीट देखि कूद बेलामा, बीचमा केही चिसो समय बिताउनु हो महत्वपूर्ण. तपाईं कम्युट रूपमा रेल मा आराम गर्न मौका पाएपछि निश्चित किन मान्छे रेल चयन धेरै कारण मध्ये एक छ.
लामो-दूरी रेल कुरा, उनीहरु यात्रा गर्न एक शानदार विकल्प तिनीहरूले केही डाउनटाइम अनुमति रूपमा. बिन्दु बी इंगित एक देखि प्राप्त2विमान द्वारा घण्टा कुशल छ, तर आफ्नो स्वास्थ्य को लागि यो सुरक्षित छ? यो हाम्रो ब्लग पोस्ट चुनौती गर्दैन “रेल एउटा को परिवहन भएको Safest मोडहरू छ”? तपाईंको सक्छ शरीर र मन जलवायु को अचानक परिवर्तन प्रक्रिया, वायुमंडलीय दबाव, र सबै बीच मा अरू? मुश्किलले. द्वारा यात्रा किन यो छ युरोप वरिपरि तालिम तपाईंको शरीरलाई परिवर्तनहरूमा प्रयोग गर्न र तिनीहरूलाई प्रक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ स्वस्थ तरिका.
ठीक एक स्वास्थ्य वा सुरक्षा लाभ, तर सामान सुरक्षा केही यात्रु लागि राम्रो महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. कुनै कुरा यदि तपाईं यात्रा को लागि हल्का प्याक कि हैन, तपाईंले एक टुक्रा आफ्नो सामान चाहनुहुन्छ. सबैभन्दा यात्री बहुमूल्य कलाकृतिहरू को संग्रहकर्ता छन्, मूर्तिहरु, कागजातहरू, आदि. अनि तिनीहरु तिनीहरूसँग उनीहरूको सम्झना चाहन्छन्. दुर्भाग्यवश, हवाई यात्रा हराएको र बिग्रिएको सामानको लागि परिचित छ जुन दुर्लभ रूपमा हुन्छ जब तपाईं ट्रेन द्वारा यात्रा गर्नुहुन्छ. प्लस, आफ्नो सामान तपाईं सधैं छ, त्यसैले कुनै एक सामान दावी मा यो खोसी. यो रेल यातायात को safest मोड मध्ये एक छ भन्न कारण छ? हामी त लाग्छ.
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-safest-transportation%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#modesoftravel	#सुरक्षित	#सफ्ट्राभेल	#यातायात